ပန်ဒိုရာ: ပုလင်းများစွာရဲ့ story
Posted by pandora at 8:16 PM
အစ်မ အနော်တို့က ပုံလောက်နဲ့ မတိုးတော့ဘူး
(ပုလင်းကြီးပါ မျိုချပစ်လိုက်ချင်တယ်နော် ဆိုတာမျိုး..:P)
သိဘီ အမပန်က duty free မှာ အလုပ်လုပ်တာ :P
အခင်းအကျင်းက လိုသေးတယ်လေ။ အမြည်းလေးဘာလေး လုပ်ပါဦး။ နီ့ဆိုရင်တော့ အင်း တရားရုံးက လာပါဦးတဲ့ခင်ဗျ...
ချွန်ဒေါ်...ပလင်းဂွံ ဒွေ ၀ယ်ဒယ်နော်...
ကိုယ်လဲ အားကျမခံ အိမ်မှာရှိသမျှ ကော်ဖီမှုန့် ပုလင်းတွေ ခင်းကျင်းလိုက်ရင် ဘာ “ရသ” များရလာမလဲလို့ စဉ်းစားနေမိတယ်... :D
ထောင်နေတဲ့ ပုလင်း ၅ လုံးက မမူးသေးဘူးဆိုတဲ့သဘော။
လဲနေတဲ့ ပုလင်းတွေကတော့ မူးပြီပေါ့။ ဟိုတပုလင်းက အမူးလွန်ပြီး ဇောက်ထိုးဖြစ်နေတာ ...။
ပန်ပန့် ၀ိုင်ပုလင်းတွေကြည့်ပြီး မူးတူးတူးဖြစ်လာလို့ ရေးချင်ရာတွေ လျှောက်ရေးလိုက်တယ်။
တခါတလေတော့လဲ မူးရတာ အရသာပဲ။ :P
Interesting! You keep empty bottles for some reason. We do recycle.
3D ပါလား.. ပညာပါတယ်..
သောက်ပြီးကြည့်လို့ထင်ပါရဲ့ ပိုမူးလာတယ်.. အေ့..
တစ်ခါ လောက်တော့ ဝိုင်တွေချည်းပဲ
သောက်ပြီး မူးချင်မိ ....
ခက်တာက မူးလောက်တဲ့ အရေ အတွက်က
ဈေးနှုန်းနဲ့ ခဏခဏ ကတောက်ကဆ ဖြစ်တာ :)
သြော်... vampire... :)
မသောက်တတ်တော့လဲ ပုလင်းကြည့်ပြီး မူးသွားတာပေါ့ အဟဲ။။
အမ ပုလင်းတွေလိုနေသေးလားလို့ :P
Modern Art??? I think only one bottle is unopened. Recycle as Steve Evergreen said or sell to Shwe Ya Tu. :P
ပန်ရေ… အဲဒီပုလင်းတွေ ဘယ်ကရသလဲဟင်…
Next meeting? I know you miss my cocktail. :P ..
An individual built several advantageous facts presently there. I did searching with regard to inside the challenge and also noticed loads of men and ladies could agree inside your web page.